Ingcuka emnyama: Inoveli entsha kaGómez-Jurado yobugebenga | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Ababhali, Inoveli, Inoveli emnyama
Caphulelwa nguJuan Gómez-Jurado.
Ingcuka emnyama (2019) yinoveli yesithoba yombhali waseSpain uJuan Gómez-Jurado kunye nesitolimende sesibini esibonisa umcuphi u-Antonia Scott njengomlinganiswa ophambili. Ezinye iincwadi ezimbini ezibonisa umphandi okhankanywe ngasentla kunye neqabane lakhe, uMhloli uJon Gutiérrez, Ukumkanikazi Olubomvu (2018) kunye Inkosi emhlophe (2020).
Le trilogy yajika umbhali waseMadrid waba ngomnye wababhexeshi abadumileyo bolwaphulo-mthetho kwiSpanish namhlanje.. Luhlelo loncwadi oludume kakhulu, enkosi - ngaphandle kukaGómez-Jurado ngokwakhe - kwiipeni ezidumileyo zikaDolores Redondo, uEva García Sáenz de Urturi kunye noCarmen Mola, ngokukhankanya nje okumbalwa.
1 Umbhali kunye noveli yakhe
2 Uhlalutyo lwengcuka emnyama
2.1 Iploti kunye nabalinganiswa abaphambili
3 Ukwamkelwa okubalulekileyo
3.1 Ingaba inoveli yolwaphulo-mthetho yisubgenre elawulwa ngabasetyhini?
4.1 Umsebenzi obalaseleyo kwiimagazini, unomathotholo kunye nomabonwakude
4.1.1 Uninzi lwemisebenzi yamva nje
4.2 Umsebenzi obhaliweyo
4.2.1 Gqibezela uluhlu lweenoveli zakhe
Umbhali kunye noveli yakhe
UGómez-Jurado ucele ukuba kungabikho mboniso upapashwayo okanye iinkcukacha ezinxulumene nomxholo wenoveli yakhe zityhilwe kumajelo eendaba. Ke ngoko, naliphi na ilinge kwi-synopsis liyachasana neso sicelo. Nangona kunjalo, ewe inokuchazwa kuyo Ingcuka emnyama njengomntu odlamkileyo, oqhutywa ngumlinganiswa ochwayitisayo ngobunzulu obuyimfuneko ngokwasengqondweni bebali elilungileyo labacuphi.
Ukwengeza, umbhali owazalelwa eMadrid wongeza iidosi ezincinci eziqhubekayo -Mas, hayi kakhulu- yoburharha obudibanisa ngokugqibeleleyo nobugqwirha obukhoyo kwindawo yonke kwisicatshulwa. Mhlawumbi isigqebelo kunye nokuhleka kumbindi weyelenqe kubonisa ukubanjwa kwantlandlolo kwebali eliguquguqukayo lomntu wesithathu.
Uhlalutyo Ingcuka emnyama
Iploti kunye nabalinganiswa abaphambili
Umsonto obalisayo ujikeleza kuphando olwenziwa ngumcuphi u-Antonia Scott kunye neqabane lakhe uJon Gutiérrez.. Aba babini, nangona benobuntu obuchasayo, ngumxube osebenzayo xa kujongwa ukubulawa kwabantu okunzima ukukusombulula. Kwelinye icala, ngumfazi omncinci ngesiqu kodwa uzimisele, akoyiki mntu.
Endaweni yoko, uyindoda yaseBasque enomzimba omkhulu kunye nomlinganiswa ohloniphekileyo. Ekuqaleni kwencwadi intshukumo iya kwiindawo ezimbini. Kwelinye icala, kufunyenwe umzimba kumlambo iManzanares (eMadrid). Ngaxeshanye, eMalaga ibhinqa labulawa ngaphakathi kwindawo yeevenkile. I-notoriety yokugqibela kukuba, ngokucacileyo, umntu oshonile wayejoliswe kwi-mafia yaseRashiya.
Ingcuka emnyama (Icebo)
Umbalisi owazi konke oqeshwe ngu UJuan Gómez-Jurado ukhuthaza umfundi ukuba azintywilisele kwiimeko ezifunyanwa ngabalinganiswa. Olu hlobo lombalisi luvumela ukuba sihlolisise iingqondo ze-protagonists: indlela abacinga ngayo, isizathu sezenzo zabo, imvelaphi yeemvakalelo zabo ... Konke oku kudala ukufunda okukwazi ukubandakanya kwiphepha elinye.
Ukongeza, iingxoxo zenoveli zinyanisekile kwaye zicaciswe kakuhle, ezigqitywe ngamaxwebhu abalaseleyo anikezelwe ngumbhali kwizicwangciso. Ngokuhambelanayo, Iinkcazelo zolwaphulo-mthetho zicokisekile kunye nezalathiso malunga nokusebenza kwemibutho ezinikele ekurhwebeni kweziyobisi. kumanxweme aseAndalusi.
Ingcuka emnyama Kuye kwaba yinoveli elinganiswe ezintlanu (ubuninzi) kunye neenkwenkwezi ezine kwi-Amazon kwi-61% kunye ne-28% yokuphonononga, ngokulandelanayo. Ukwengeza, Amagqabantshintshi kwiqonga ekujoliswe kulo nakwamanye amasango anikezelwe kugxeko loncwadi athetha ngebali elidlamkileyo., egcwele intandabuzo kunye nobunzulu obumangalisayo bengqondo.
Ingaba inoveli yolwaphulo-mthetho yisubgenre elawulwa ngabasetyhini?
Iingxoxo ze Iincwadi zokuqala zikaGómez-Jurado bafaniswa nezo zikaDan Brown ngenxa yokudibana kwimiba yeyelenqe, yezopolitiko neyenkolo. Ngendlela enye, Akunakuphepheka ukubhanqa u-Antonia Scott kunye nabalinganiswa abaphambili benoveli yolwaphulo-mthetho kaDolores Redondo., UCarmen Mola okanye uAntonio Mecerro, phakathi kwabanye. (Bonke ngabafazi abakrelekrele abanomoya onamandla.)
Enyanisweni, Ingcuka emnyama iqinisekisa intsingiselo yangoku yempumelelo yokuhlela emelwe ziinoveli zolwaphulo-mthetho zaseSpain ezinabalinganiswa ababhinqileyo. Akumangalisi ukuba abalinganiswa abanjengoAmaia Salazar (Redondo) okanye u-Elena Blanco (Mola) bafumene indawo ekhethekileyo phakathi kwabalandeli bamapolisa abonwabisayo. Ngokuqinisekileyo uScott ukwayinxalenye yelo qela likhethiweyo.
UJuan Gómez-Jurado yinzalelwane yaseMadrid. Wazalwa ngoDisemba 16, 1977. Kwikomkhulu laseSpain Ufumene isidanga sakhe kwiSayensi yoLwazi, ngakumbi kwi-CEU San Pablo University. Le ndlu yokufunda yabucala liziko elilawulwa phantsi kwemithetho yobuKatolika kunye nento ebizwa ngokuba yiChristian humanism.
Ingcamango yezakwalizwi yombhali waseMadrid ibonakala kwiincwadi zakhe zokuqala, ngakumbi kwincwadi yakhe yokuqala, Umhloli kaThixo (2006). Ngelo xesha, intatheli yayisele isebenzele imithombo yeendaba eyahlukeneyo, kubandakanya iRadio España, iCanal + kunye neCadena COPE.
Umsebenzi obalaseleyo kwiimagazini, unomathotholo kunye nomabonwakude
Umbhali wase-Iberia usebenzisane neemagazini ezahlukeneyo zelizwe kunye nezangaphandle. Phakathi kwabo: Yintoni yokufunda, Beka phantsi y Ukuhlaziywa kweNcwadi yeNew York Times. Ngokulinganayo, waziwa kakhulu ngokuvela kwakhe kwiinkqubo ezahlukeneyo zikanomathotholo nakumabonakude. Enye yezona zidumileyo ibe licandelo elithi "Abantu ngabanye" -kunye noRaquel Martos - wenkqubo. Julia phezu kwamaza ngu-Onda Cero (2014 - 2018).
Ngokukwanjalo, iGómez-Jurado iye yathandwa ngabaphulaphuli baseSpain ngenxa yeepodcasts Somandla (kunye noArturo González-Campos, uJavier Cansado noRodrigo Cortés) kunye Nazi iidragons. Ngokuphathelele kuthotho lukamabonwakude, ukubonakala kwabo kwi Iiseriotes ze-AXN nakwinkqubo yasehlotyeni yabathandi befilimu ICinemascopazo (2017 kunye ne-2018).
Uninzi lwemisebenzi yamva nje
Umbonisi we I-flux capacitor kwiLa 2, inkqubo yomxholo wembali-yenkcubeko (2021)
Umbhali-mbhali-kunye nomfazi wakhe, uGqr kwi-Child Psychology uBárbara Montes-yechungechunge lolutsha UAmanda Mnyama
Ngo-2021, watyikitya isivumelwano kunye neqonga leNkulumbuso yaseAmazon ukuba abe ngumyili womxholo okhethekileyo wophawu.
Inoveli yesibini kaJuan Gómez-Jurado, Isivumelwano nothixo (2007), imele upapasho olungcwalisayo kwinqanaba lesizwe nelamazwe ngamazwe. bucala ngasekhohlo ethengwa wabelana ngemixholo emininzi kunye nabalinganiswa abachazwe kweyakhe Umhloli kaThixo. Nangona kunjalo, Umbhali waseMadrid akayongcali kuphela kwinoveli, njengoko ebonakalise ubuchule bakhe bokudala ngokungena kwezinye iintlobo.
Ubungqina boku sisihloko esingeyonyani I-Virginia Tech Massacre: I-Anatomy yeNgqondo Ethuthunjisiweyo (2007). Ngokufanayo, upapashe ngempumelelo uthotho lweencwadi ezimbini zabantwana nolutsha, UAlex Colt (iincwadi ezi-5) kunye Rexcatators (iincwadi ezi-3). Ukongeza kuthotho UAmanda Mnyama, kunye nokukhutshwa kabini ukuza kuthi ga ngoku.
Gqibezela uluhlu lweenoveli zakhe
Iincwadi zikaJuan Gómez-Jurado.
Intlola kaThixo (2006)
Isivumelwano nothixo (2007)
Umfuziselo woMngcatshi (2008)
Intsomi yesela (2012)
Imbali efihlakeleyo kaMnu White (2015)
Ukumkanikazi Olubomvu (2018)
Ingcuka emnyama (2019)
Inkosi emhlophe (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Ingcuka emnyama